Operations Archives | Zeevou
Ny fahazoana famandrihana mivantana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny Google dia nofinofy izay tanteraka amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fidiran'i Zeevou amin'ireo rohy famandrihana maimaim-poana an'ny Google.
Tantano arak'izay azo atao ny fifandraisana eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipao, alefaso ny hafatra, zarao ireo antontan-taratasy sy maro hafa miaraka amin'ny fampidirana Zeevou sy Slack.
Ampifanaraho amin'ny Google Sheets miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy i Zeevou, alaivo sary an-tsaina sy fandinihana angon-drakitra lalindalina kokoa, ary manatsara paikady raha ilaina.
Ento izay rehetra ilain'ny ekipananao hampitaina, hiaraha-miasa ary handrindrana ireo lahasa ary hijanona ho voalamina sy mifandray.
Mametraha tsangambato maro isan-karazany ao amin'ny Zapier hampifandray an'i Zeevou amin'ny Kalandrie Google, ary aza hadinoina intsony ny hetsika na hetsika ho avy.
Aza adino mihitsy ny fahadiovana iray hafa, ny fizahana asa hafa, manara-maso ny olana rehetra momba ny fikolokoloana, ary mitsitsy fotoana sy vola.
Alefaso mivantana amin'ny Internet ny fitsipiky ny mpitsidika ny fatorana sy fiarovana amin'ny Internet ary alao sonia elektronika ny valiny.
Ataovy mandeha automatique ny andiam-panangonana sy kaodim-pitetezana. Ampiasao ity ho an'ny lakilen'ny mpitsidika mifandraika amin'ny famandrihana, ary ho an'ny lakile fampiasan'ny mpiasa na ny mpanadio.